'Ukuvuka Okubi Okubi' Kuqala Ukukhiqizwa Futhi Kwabiwe Isithombe Esipholile - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo 'Ukuvuka Okubi Okubi' Kuqala Ukukhiqizwa Futhi Kwabiwe Isithombe Esipholile
'Ukuvuka Okubi Okubi' Kuqala Ukukhiqizwa Futhi Kwabiwe Isithombe Esipholile
by UTrey Hilburn III June 8, 2021
by UTrey Hilburn III June 8, 2021 1,896 ukubukwa
Ngikusho kaninginingi. Okuningi Ukufa Okubi izindaba izindaba ezinhle. Izindaba zakamuva ezivela ku- okubulalayo ikamu yilokho Ukuvuka Okubi Kufile useqalile ukukhiqiza… namuhla. Halala!
Ekuqaleni kwakukholakala ukuthi kuzoqala ukukhiqizwa kamuva kulo nyaka, kwaba isimanga esikhulu futhi esifanelekile ukubona umqondisi u-Lee Cronin ethumela isithombe esipholile kakhulu esivela ku-Twitter yakhe ekhombisa ukuqala komkhiqizo ku Ukufa Okubi Okubie. UBruce Campbell noSam Raimi baqhubeka njengabakhiqizi kulesi sahluko esisodwa; lokho kuzobona abafileyo bengena endaweni yasemadolobheni bese beshiya imingcele yehlathi kanye nendlwana.
Okwamanje akukho okuningi okwaziwayo mayelana nokuthi ikuphi ku- Ukufa Okubi umugqa wesikhathi Rise izolingana. Isibonelo, kuzoba ukulandela umugqa wethilogili yokuqala kaBruce Campbell - ukuphuma kuka-Ashley Williams noma mhlawumbe kuzosuka ekuqaliseni kabusha? Noma mhlawumbe kuzoba yi-prequel konke ndawonye? Into eyodwa iqinisekile, ngaphezulu Ukufa Okubi kuhle.
Bobabili uLilly Sullivan no-Alyssa Sutherland kulindeleke ukuthi badlale kulo mdlalo Ukuvuka Okubi Kufile futhi sijabule kakhulu ngokujabula ngalokho. U-Lee Cronin oqondise I-Hole kuGround, manje ubeka umbono wakhe kubantu abafile. Ngemuva kokubona Imbobo Phansi sibambe ithemba. Amafilimu ahluke kakhulu. Uma ubheka i-punk rock pacing ye Ukufa Okubi amafilimu nokusha okuhamba kancane kanye nejubane leqhwa le- I-Hole kuGround. Kuzoba mnandi ukubona ukuthi uyisa kanjani kulokho okubhaliwe. Njengathi sonke, uCronin ungumthandi wenkululeko, ngakho-ke ngiyaqiniseka ukuthi uzokwenza okulengqondo yakhe ukusinikeza okufanele Ukufa Okubi ifilimu.
Ngabe nina bantu nicabangani ngezindaba ezinhle zokukhiqiza nesithombe sazo Ukuvuka Okubi Kufile? Sazise esigabeni sokuphawula.
Usuku lwe-1. #EvilDeadRise pic.twitter.com/bWNpC8Ex3b
- Lee Cronin (@curleecronin) June 6, 2021
URob Zombie ukuqinisekisile ukuzibandakanya kwakhe neThe Munsters ngaphezulu kwase-Universal. Funda kabanzi lapha.